Home Wararka Sacdiyo Yaasiin Samatar oo ku guuleysatay Guddoomiye kuxigeenka koowaad ee BF
Sacdiyo Yaasiin Samatar oo ku guuleysatay Guddoomiye kuxigeenka koowaad ee BF
Waxaa lasoo gabagabeeyay doorashadii guddoomiye kuxigeenka koowaad ee baarlamaanka, waxaana ku guuleysatay Sacdiyo Yaasiin Samatar.
Natiijada hordhaca ayaa sheegeysa in Xildhibaanad Sacdiyo Yaasiin Samatar ay guusha doorashada raacday inkastoo weli cododka la tirin.
Labada murashax oo isbaheysiga mucaaradka ay kala taageerayeen ayaa markii danbe xildhibaanad Sacdiyo Yaasiin Samatar waxay taageero ka heshay Villa Somalia, markii murashaxiintii ay taageerayeen tanaasuleen.
Mas’uul ka tirsan Villa Somalia ayaa caasimada Online u sheegay in Sacdiyo ay taageerayeen saacadihii u danbeeyay, taasoo u sahashay inay kordhaan cododkeeda.
Waxaa hadda socda tirinta cododka guddoomiye kuxigeenka labaad oo ay ku tartamayaan Mahad Cabdalla Cawad iyo Cabdullaahi Cumar Abshiroow.
Previous articleLabo Musharax oo mucaarad ah oo iskugu soo haray wareegga labaad ee Gudoomiye ku xigeenka golah
Next articleMW Axmad Karaash oo ku baaqay isku soo baxyo Roobdoon
Farmaajo iyo Fahad oo loo diray digniin adag oo ku aadan...
Shirkii Seddexaad oo Madasha Musharaxiinta & Rooble oo Bilowday